ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ Title race နဲ့ အိုးထရပျဖိုဒျရဲ့ အင်ျဂလနျ ဒါဘီ ပှဲစဉျကို ခနျ့မှနျးလိုကျတဲ့ ကတျလနျး - SPORTS MYANMAR
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ Title race နဲ့ အိုးထရပျဖိုဒျရဲ့ အင်ျဂလနျ ဒါဘီ ပှဲစဉျကို ခနျ့မှနျးလိုကျတဲ့ ကတျလနျး
လီဗာပူး အသငျးဟာ ဒီရာသီ ၎င်းငျးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပွိုငျဘကျ အသငျးတှေ လိုကျမှီဖို့ အတှကျ အရမျးကို ရှရေ့ောကျလှနျး နတေယျလို့ အနျဖီး ဂိုးသမားဟောငျး ခရဈကတျလနျး က ဆိုသှား ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ တဈပတျက ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံ အသငျး အိမျကှငျးမှာ ၀ုဖျအသငျးကို ၂ ဂိုးပွတျ နဲ့ အံ့အားသငျ့ဖှယျ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့တာကွောငျ့ ယာဂနျကလော့ ရဲ့ အသငျးဟာ အမှတျပေးဇယား ထိပျမှာ ၈ မှတျ အသာနဲ့ ဦးဆောငျ နိုငျခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တုနျးကလညျး မနျစီးတီးကို ရ မှတျ ဖွတျနိုငျ ခဲ့ပမေယျ့လညျး ရာသီ နောကျဆုံး ပှဲစဉျမှာတော့ ပကျဂှာဒီယိုလာ ရဲ့ အသငျးထကျ တဈမှတျ လြော့နညျးကာ အမှတျပေးဖလား ကို လကျလှတျ ခဲ့ရပါတယျ။ သို့ပမေယျ့လညျး ကတျလနျး က သူ့ရဲ့ အသငျးဟာ ဒီရာသီ မှာတော့ စီးတီးတို့ နောကျတဈကွိမျ ပွနျလာဖို့ မလှယျလောကျတဲ့ အကှာအဝေးမှာ ရှိနပွေီလို့ ယုံကွညျ နပေါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ဟာ အနျဖီးကို ဦးတညျ နပွေီလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို လီဗာပူး ဂိုးသမားဟောငျးက “ရိုးရိုးသားသား ပွောရရငျ ကြှနျတျော ဒီလိုပဲ ထငျမိပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လီဗာပူးဟာ အရမျးကို ကံမကောငျး ခဲ့ပါဘူး။ လူတှေ ပွောဆို နကွေတဲ့ အတိုငျး အမှတျပေးဖလား ကို ၁ မှတျတညျးနဲ့ ကပျပွီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတာဟာ တကယျ့ကို ယူကြုံး မရ စရာပါပဲ။
ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ ကတော့ စီးတီး နောကျကနေ တဈမှတျ အကှာနဲ့ ဖလား ဆုံးရှုံးတာထကျ စာရငျ ရမှတျ ၁၅ မှတျ ၁၆ မှတျနဲ့ ဖလား လကျလှတျ ရတာက ပိုခံ သာပါတယျ။ ကြှနျတျော ကတော့ ဒီရာသီ စီးတီး ရဲ့ နောကျတနျး ဒဏျရာ ပွသနာတှေ ၊ လာပေါ့ဒျ ဟာ သူတို့ အတှကျ ကွီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဖွဈပါတယျ။ ဗငျဆနျ့ ကှနျပနီ ကလညျး သူတို့ အတှကျ ကွီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ပါပဲ။ နောကျတနျး ပွသနာဟာ သူတို့ ထိုးနှကျ နိုငျပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ သူတို့နဲ့ ကစားတဲ့ အခါ ရမှတျတှေ ရယူ နိုငျခဲ့မယျ ဆိုရငျ ရုတျတရကျ ဆိုသလို ကိုယျ့အသငျးဟာ အမှတျ ၂ ဆ ရသလို ဖွဈသှား မှာပါ။ ခငျဗြားတို့ ဒီရာသီ လီဗာပူး အသငျး ၄ ပှဲ ၅ ပှဲ ရှုံးနိုငျမယျလို့ ထငျသလား? ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကစားပုံ အရ ဒီလို ဖွဈစရာ မရှိပါဘူး။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
လီဗာပူးဟ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ၈ ပှဲကစား ၈ပှဲစလုံး အနိုငျ ရရှိ ထားခဲ့ပွီး အခု ဆိုရငျ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၁၀၇ ခုနှဈက မနျခကျြစတာစီးတီး အသငျး တငျထား ခဲ့တဲ့ ၁၈ ပှဲဆကျ ပရီးမီးယားလိဂျ နိုငျပှဲ မှတျတမျးကို လိုကျမှီရနျ တဈပှဲသာ လိုပါတော့တယျ။ လီဗာပူး အနနေဲ့ လာမညျ့ အောကျတိုဘာလ ၂၀ ရကျနေ့ အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ မနျယူနိုကျတကျကို အနိုငျ ရရှိ ခဲ့မယျ ဆိုပါက မနျစီးတီးရဲ့ စံခြိနျကို လိုကျမှီမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကတျလနျး က “ဒီစံခြိနျကို လုပျပွဖို့ အတှကျ ဘယျလောကျ ကောငျးလိုကျတဲ့ နရောလဲဗြာ။ မနျယူနိုကျတကျဟာ အိုလီ ရဲ့ လကျအောကျမှာ ခကျခဲတဲ့ ကာလတှကေို ဖွတျသနျး နရေပမေယျ့ သူတို့ဟာ ဒီပှဲ အတှကျ အားခဲ နမှော သခြောပါတယျ။
ဒီပှဲဟာ ဘယျလောကျ အဓိပ်ပာယျ ရှိသလဲ ဆိုတာ ပရိတျသတျတှေ ကောငျးကောငျး သိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော ကတော့ လီဗာပူးတို့ အိုးထရပျဖို့ဒျကို သှားပွီး ရလဒျကောငျး ရယူ နိုငျလိမျ့မယျလို့ ကြှနျတျော မြှျောလငျ့ ပါတယျ။ သူတို့ ကြှနျတျောတို့ကို ရပျတနျ့ နိုငျမယျလို့ မထငျမိ ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ တိုကျစဈ ကစားပုံ ၊ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ခံစဈ ကစားပုံ နဲ့ ကြှနျတျောတို့ဟာ တဈသငျးလုံး မာကြော နပေါတယျ။ ကြှနျတျော ကတော့ လီဗာပူးတို့ အနျိုငျ ၃ မှတျ ရယူ နိုငျလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် Title race နဲ့ အိုးထရပ်ဖိုဒ်ရဲ့ အင်္ဂလန် ဒါဘီ ပွဲစဉ်ကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ကတ်လန်း
လီဗာပူး အသင်းဟာ ဒီရာသီ ၎င်းရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ဘက် အသင်းတွေ လိုက်မှီဖို့ အတွက် အရမ်းကို ရှေ့ရောက်လွန်း နေတယ်လို့ အန်ဖီး ဂိုးသမားဟောင်း ခရစ်ကတ်လန်း က ဆိုသွား ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ အသင်း အိမ်ကွင်းမှာ ၀ုဖ်အသင်းကို ၂ ဂိုးပြတ် နဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ရှုံးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်းဟာ အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်မှာ ၈ မှတ် အသာနဲ့ ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တုန်းကလည်း မန်စီးတီးကို ၇ မှတ် ဖြတ်နိုင် ခဲ့ပေမယ့်လည်း ရာသီ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်မှာတော့ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ အသင်းထက် တစ်မှတ် လျော့နည်းကာ အမှတ်ပေးဖလား ကို လက်လွှတ် ခဲ့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ကတ်လန်း က သူ့ရဲ့ အသင်းဟာ ဒီရာသီ မှာတော့ စီးတီးတို့ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လာဖို့ မလွယ်လောက်တဲ့ အကွာအဝေးမှာ ရှိနေပြီလို့ ယုံကြည် နေပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ဟာ အန်ဖီးကို ဦးတည် နေပြီလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို လီဗာပူး ဂိုးသမားဟောင်းက “ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် ကျွန်တော် ဒီလိုပဲ ထင်မိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လီဗာပူးဟာ အရမ်းကို ကံမကောင်း ခဲ့ပါဘူး။ လူတွေ ပြောဆို နေကြတဲ့ အတိုင်း အမှတ်ပေးဖလား ကို ၁ မှတ်တည်းနဲ့ ကပ်ပြီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတာဟာ တကယ့်ကို ယူကျုံး မရ စရာပါပဲ။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကတော့ စီးတီး နောက်ကနေ တစ်မှတ် အကွာနဲ့ ဖလား ဆုံးရှုံးတာထက် စာရင် ရမှတ် ၁၅ မှတ် ၁၆ မှတ်နဲ့ ဖလား လက်လွှတ် ရတာက ပိုခံ သာပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီရာသီ စီးတီး ရဲ့ နောက်တန်း ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေ ၊ လာပေါ့ဒ် ဟာ သူတို့ အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဗင်ဆန့် ကွန်ပနီ ကလည်း သူတို့ အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ပါပဲ။ နောက်တန်း ပြသနာဟာ သူတို့ ထိုးနှက် နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သူတို့နဲ့ ကစားတဲ့ အခါ ရမှတ်တွေ ရယူ နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ရုတ်တရက် ဆိုသလို ကိုယ့်အသင်းဟာ အမှတ် ၂ ဆ ရသလို ဖြစ်သွား မှာပါ။ ခင်ဗျားတို့ ဒီရာသီ လီဗာပူး အသင်း ၄ ပွဲ ၅ ပွဲ ရှုံးနိုင်မယ်လို့ ထင်သလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကစားပုံ အရ ဒီလို ဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
လီဗာပူးဟ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ၈ ပွဲကစား ၈ပွဲစလုံး အနိုင် ရရှိ ထားခဲ့ပြီး အခု ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၁၀၇ ခုနှစ်က မန်ချက်စတာစီးတီး အသင်း တင်ထား ခဲ့တဲ့ ၁၈ ပွဲဆက် ပရီးမီးယားလိဂ် နိုင်ပွဲ မှတ်တမ်းကို လိုက်မှီရန် တစ်ပွဲသာ လိုပါတော့တယ်။ လီဗာပူး အနေနဲ့ လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ မန်ယူနိုက်တက်ကို အနိုင် ရရှိ ခဲ့မယ် ဆိုပါက မန်စီးတီးရဲ့ စံချိန်ကို လိုက်မှီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကတ်လန်း က “ဒီစံချိန်ကို လုပ်ပြဖို့ အတွက် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်တဲ့ နေရာလဲဗျာ။ မန်ယူနိုက်တက်ဟာ အိုလီ ရဲ့ လက်အောက်မှာ ခက်ခဲတဲ့ ကာလတွေကို ဖြတ်သန်း နေရပေမယ့် သူတို့ဟာ ဒီပွဲ အတွက် အားခဲ နေမှာ သေချာပါတယ်။
ဒီပွဲဟာ ဘယ်လောက် အဓိပ္ပာယ် ရှိသလဲ ဆိုတာ ပရိတ်သတ်တွေ ကောင်းကောင်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ လီဗာပူးတို့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို သွားပြီး ရလဒ်ကောင်း ရယူ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့် ပါတယ်။ သူတို့ ကျွန်တော်တို့ကို ရပ်တန့် နိုင်မယ်လို့ မထင်မိ ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုက်စစ် ကစားပုံ ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံစစ် ကစားပုံ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်သင်းလုံး မာကျော နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ လီဗာပူးတို့ အနို်င် ၃ မှတ် ရယူ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။